Focus Myanmar – Page 149
ဆီးချိုရောဂါအတွက် အဖိုးနည်းတဲ့ သရက်ရွက်အစွမ်း
သင်မသိသေးတဲ့ ဒီအရွက်တစ်မျိုးဟာ ဆီးချိုရောဂါကို ယူပစ်လိုက်သလိုပျောက်သွားစေပါတယ်။ ဆီးချိုရောဂါဟာလက်ရှိမှာလူကြီး၊လူငယ်မရွေးဖြစ်ပွားနေပြီးအထူးသဖြင့်အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့သူတွေမှာ ရောဂါရဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုဟာ ဆိုးရွားလွန်းလှပါတယ်။ ဒီ့အတွက် သဘာဝနည်းနဲ့ ကုနိုင်တာကတော့ သရက်ရွက်ပါ။ သရက်ရွက်မှာ vitamins, enzymes, antioxidants တွေအများအပြားပါဝင်တာကြောင့် သူ့ကိုကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းစွာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ နည်းလမ်းကတော့ သရက်ရွက်နုနုလေး ၁ဝရွက်ကနေ ၁၅ရွက်အထိခူးပြီး ရေတစ်ဖန်ခွက်စာပမာဏနဲ့ ပြုတ်ပါ။ ပြီးရင် ထိုအတိုင်း တစ်ညတာထားပါ။ နောက်တစ်နေ့မနက်ရောက်တဲ့အခါဘာမှမစားရသေးခင်း ပြုတ်ထားတဲ့အရည်ကိုသောက်ပါ။ ဒီအတိုင်း နှစ်လကနေ သုံးလ ဆက်တိုက်သာလုပ်ပေးမယ်ဆို သင့်ရဲ့ ဆီးချိုရောဂါပျောက်ကင်းတဲ့အပြင် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပြောင်းလဲမှုကို သိသိသာသာခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်နည်းကတော့ နေရောင်မကျတဲ့နေရာမှာ သရက်ရွက်တွေကို အခြောက်ခံထားပါ။ ပြီးရင် ခြောက်နေတဲ့အရွက်တွေကိုအမှုန့်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတစ်နေ့ကိုလက်ဖက်ရည်ဇွန်းနဲ့ နှစ်ဇွန်းသောက်သုံးပေးပါ။ ကျန်းမာရေး သိသိသာသာကောင်းမွန်လာတာကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ရေချိုးခန်းထဲ ရေချိုးနေတုန်း သီချင်းဆိုခြင်းရဲ့ ကျန်းမာရေးကောင်းကျိုး
ရေချိုးခန်းထဲ ရေချိုးနေတုန်း သီချင်းဆိုတာဟာ ကျန်းမာရေး ကောင်း ကျိုး များစွာ ပေးစွမ်းတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဥပမာ – ဖိတ်ဖိစီးမှု ကျဆင်းစေခြင်း၊ အာရုံစူးစိုက်မှု ကောင်းစေခြင်း၊ သွေး ပေါင်ချိန် ကျဆင်းစေခြင်း နဲ့ ကိုယ်ခံစား ကောင်းစေခြင်းတို့ကို ဖြစ်ပေါ် စေပါတယ်။ ရေချိုးစဉ် သီချင်းဆိုခြင်းက ယင်း ကျန်းမာရေး ကောင်းကျိုးအပြင် အသံ ကောင်းစေတဲ့ ကောင်းကျိုးလည်း ပေးပါသေးတယ်။ သီချင်း ဆိုဖို့တင် မကပဲ သွက်လက်ချက်ချာစေပြီး လုပ်ငန်းဆောင်တာတိုင်းအတွက် Active ဖြစ်စေ တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရေချိုးစဉ် သီချင်းဆိုခြင်းက ကျန်းမာရေး ကောင်းကျိုး ပြုတယ်လို့ လေ့လာသူများက သက်သေ ပြု ထားပါတယ်။ Credit
ထမင်းဟင်းချက်တတ်သူပီပီ ရောက်လေရာအရပ်ရှိ အသားငါးဈေးကိုတော့ ကျွန်မ သွားလေ့သွားထရှိပါတယ်။ မနှစ်က ငပုတောမြို့နယ်အပိုင် သင်ကမ်းကုန်းရွာလေးကို အလုပ် တာဝန်နဲ့ ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မထုံးစံအတိုင်း မနက်စောစောထပြီး လမ်းလျှောက်ထွက်လိုက်ပါတယ်။ ရွာဆိုတော့လဲ ရွာလမ်းမကျယ်ကြီးတစ်ခု ရှိတာပေါ့။ တည်းအိမ်ကနေ လမ်းမကြီးအတိုင်း ကျွန်မလျှောက်သွား ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ ပထမနေ့က နံနက်စောစော ၅နာရီထပြီး ကွင်းဆင်းသွားရတာကြောင့် ကျွန်မ ရွာထဲ လျှောက်မလေ့လာ ဖြစ်လိုက်ရပါဘူး။ ဒုတိယနေ့မှာတော့ ရွာပတ်ဝန်းကျင်တစ်ဝိုက်လောက်ပဲ သွားစရာရှိတာကြောင့် ကျွန်မတို့အဖွဲ့က ၇ နာရီ ထိုးလောက်ကျမှ ရွာထဲ ကော်ဖီထွက်သောက်ကြပါတယ်။ ကျွန်မက နောက်မှလိုက်လာမယ်ပြောလိုက်ပြီး ကျွန်မလေ့လာချင်တဲ့ ဈေးဘက်ကို ဦးတည်ပြီး တစ်ယောက်တည်း သွားလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်မလျှောက်သွားရင်း လမ်းမတန်းကြီးရှိ မုန့်ဆိုင်၊ ကုန်စုံဆိုင်၊ မုန့်ဟင်းခါးဆိုင်၊ ကွမ်းယာဆိုင်၊ ဆေးဆိုင်လေးတွေ စဖွင့်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။ အမျိုးသမီး ပျိုပျိုရွယ်ရွယ် အသက်ကြီးပါမကျန် ဦးတည်သွားနေကြတဲ့ လမ်းကြားလေးနောက်ကို ကျွန်မ...
ကျောက်ကပ်မှာရှိတဲ့ အဆိပ်အတောက်များကို ဆေးကြောပေးသည့် အစားအစာများ
ကျောက်ကပ်ဟာလည်း လူမှာ အရေးကြီးသည့် အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်မှာ အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသည့် ဓာတ်တွေကို ကျောက်ကပ်မှာ ဖယ်ရှားပေးပြီး ဆီးအဖြစ် ခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပကို စွန့်ထုတ်ပါတယ်။ တခါတရံ ကျောက်ကပ်မှာ အဆိပ်အတောက်တွေ များပြီး ကျောက်ကပ် ပျက်စီးတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သဘာဝ အစားအစာများနှင့် ကျောက်ကပ်မှာရှိတဲ့ အဆိပ်အတောက်များကို ဘယ်လို ဆေးကျောကြမလဲ။ ရေ ရေက ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း နှင့် ကျောက်ကပ်မှာရှိတဲ့ အဆိပ်အတောက်တွေကို ပျောက်ကင်းဖို့အကောင်းဆုံးပါဘဲ။ ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ် အလေးချိန်အပေါ်မူတည်ပြီး တစ်နေ့ကို ရေ ၆ ခွက်ကနေ ၈ ခွက်ကြား အနည်းဆုံး သောက်သုံးသင့်ပါတယ်။ ပန်းသီး ပန်းသီးမှာ ပိုတက်ဆီယမ် ဓာတ်ပါဝင်မှု နည်းပါးပြီး ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း အဆိပ်အတောက်များ ဖယ်ရှားပေးနိုင်တဲ့ သဘာဝ ဆေးတစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့က ဆီး ခဏခဏ မသွားစေဘဲနဲ့ ကျောက်ကပ်ကို သန့်ရှင်းပြုလုပ်ပေးပါတယ်။ မှို ကျောက်ကပ်...
လက်ကိုင်ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး အရေးကြီးသည့် ကျန်းမာရေးဗဟုသုတတစ်ခုကို မိတ်ဆွေများအတွက် မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ ဒီခေတ်မှာ ဟန်းဖုန်းများ ပေါများစွာ ပေါ်ပေါက်လာပြီး အရွယ်ရောက်ပြီးသူ လူတိုင်းနီးပါး အသုံးပြုလာနေကြပါပြီ။ လူအများဟာ အိပ်ယာဝင်ခါနီးမှာ အများဆုံး အသုံးပြုနေကြပြီး ခေါင်းအုံးအနားမှာပဲချထားကာ အိပ်ပျော်သွားတတ်ကြပါတယ်။ လက်ကိုင်ဖုန်းအတွင်းမှာပါတဲ့ နည်းပညာနဲ့ပြုလုပ်ထားပြီး သာမန်မျက်စိနဲ့ မမြင်နိုင်တဲ့ ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်း ထုတ်လွတ်ပေးပြီး ရေဒီယိုလှိုင်း ချုံ့၊ ချဲ့လုပ်ပေးတဲ့ လှိင်းများဟာ လူတွေရဲ့ ဦးနှောက်သွေးကြောများကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ pA IC ,rf IC တို့ဟာ ဖုန်းကို ပါဝါပိတ်ထားသည့်တိုင် အထဲမှာ ဆက်ပြီး အလုပ်လုပ်နေပါသေးတယ်။ ခေါင်းအုံးနားမှာ အချိန်ကြာမြင့်စွာ ချထားမိရင် ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေပါတယ်။ ချက်ချင်းကြီး မသိသာပေမယ့် အစပိုင်းမှာ သတိလက်လွတ်ဖြစ်ခြင်း၊ မကြာခဏ မေ့လွယ်ခြင်းနဲ့ မှတ်ဉာဏ်ချို့ယွင်းခြင်းများကို ဖြစ်စေတတ်ပြီး ရေရှည်မှာတော့ ဦးနှောက်ကင်ဆာအထိ ဖြစ်ပွါးစေနိုင်ကြောင်း လေ့လာသူများက ဆိုထားပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်...
ဥာဏ်ကောင်းကိုကောင်းစေရပါမယ်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူး။ သေချာတာကတော့ ဦးနှောက်ကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေမယ့် နည်းလမ်းများ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဘာသာပြန် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ 1. Go forawalk withafriend လုပ်ငန်းခွင်ရယ်လို့မဟုတ်ပါဘူး။ သင်တန်း၊ကျောင်း တက်သူများအနေနဲ့လည်း ရုံးတက်၊ ကျောင်းတက်ချိန် မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်း နဲ့သွားရပါမယ်။ အဲဒီလိုသွားခြင်းက လူမှုဆက်ဆံရေး၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ခန်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တက်ကြွရေး တို့မှာ တိုးတက်စေမှာ ပြီး ဦးနှောက်ကို သန်မာစေပါတယ်။ 2. Solve Puzzles, Play Games ဥာဏ်စမ်းဂိမ်းများ၊ ပဟေဌိဂိမ်းများ ဆော့ကစားပေး ရပါမယ်။ ဖြေရှင်းရ ခက်သော ဆူဒိုခု၊ စာလုံးစီ တို့ကို ဆော့ကစား ပေးခြင်း၊ အလွယ်တ ကူ ဆော့ရသော ဖုန်းထဲမှ ဂိမ်း၊ ကွန်ပျူတာဂိမ်း၊ ကစားကွင်း ဂိမ်း အစရှိသဖြင့်တို့ကို မိနစ်ပိုင်း...
အရသာ ခါးသက်သက်နဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကြိုးမရှိပဲ သင်္ဘောရွက်ကြိတ်ရေ သောက်သုံးခြင်းဖြင့် ပျောက်ကင်းနိုင်သော ရောဂါများ
နိုင်ငံတကာဆေးလောက ပညာရှင်တွေ အတည်ပြုခဲ့ရတဲ့ ဆေးစွမ်းထက်တဲ့ သင်္ဘောပင်အရွက် ရဲ့အာနိသင်ဟာ တကယ်ကို ဆေးဝါးအဖြစ်သုံးနိုင်ပြီး အာနိသင်ထက်မြက်ကြောင်းသိရပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ ရောဂါပိုးတွေ တိုက်ဖျက်ပေးပြီး ကိုယ်ခံအား ကောင်းမွန်စေပါတယ်။သင်္ဘောသီးမှာ ဗီတာမင် အေ၊စီ၊အီးနဲ့ဗီတာမင်ကေ စတဲ့ ဗီတာမင်ဓါတ် များစွာ ပါဝင်ပြီး ကိုယ်ခန္ဓာအတွက် ကိုယ်ခံအားအောင်း ကောင်းမွန်တဲ့ ဓာတ်များဖြစ်တဲ့ magnesium, potassium, niacin, carotene, proteins, fibers နဲ့ papain enzyme များ ပါဝင်ပါတယ်။ (၁) – ကင်ဆာရောဂါခံစားနေရတဲ့ ဝေဒနာရှင်များ အတွက် ကင်ဆာဆဲလ်တွေ ကို ရှင်းပစ်နိုင်ပါတယ်။ (၂) – ခြင်ကိုက်ရာမှ ဖြစ်ပေါ်လာသော အဖျားရောဂါများ ငှက်ဖျား – malaria – တုတ်ကွေး – dengue fever အဖျားပျောက်ကင်းနိုင်ပါတယ်။ (၃)...
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလည်းမရှိ၍ လိပ်ခေါင်းဝေဒနာရှင်များ ငွေကြေးကုန်ကျမှုမရှိပါဘဲလိုအပ်သူတို့အသုံးချနိုင်ပါရန် တင်ပြအပ်ပါသည်။ အချို့ကလိပ်ခေါင်းဖြစ်မှန်မသိဖြစ်နေတတ်ပါသည်။ လက်တွေ့ဝေဒနာခံစားရသူ မိတ်ဆွေပြောပြသည်မှာ လိပ်ခေါင်းဖြစ်သောလက္ခဏာများမှာသွေးယိုစီးခြင်း၊အဆစ်အမြစ်ကိုက်ခဲ၍ ၀မ်းသွားရခက်ခဲခြင်း၊ အကြောအချဉ်များတုံ့ဆိုင်း တတ်ခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်ဆိုပါသည်အတော်စိတ်ပျက်စရာကောင်းတဲ့ရောဂါ ဟုပြောပါသည်။ အခုရော ပျောက်သွားပြီးလား မေးမိရာ…ပျောက်ချင်တော့လည်း လိပ်ခေါင်းဆေးစုံနေတဲ့ ကျွန်တော် ကံစပ်ချင်တော့ ဆေးမြီးတိုလေးနဲ့ပျောက်တယ်။ အိမ်ခြံထဲ ကအပင်တွေပါပဲ..ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်…။ ထိကရုံးပင် အရွက်၊ရိုးတံအနုလေးတွေကို ဆုံသန့်သန့်လေးမှာထောင်းရတယ်အဲဒီကထွက်တဲ့ သတ္တုရည်နဲ့ ထိကရုံးဖက်အကြေကို ညအိပ်ချိန်တိုင်း စအိုကြား ထဲထည့်အိပ်ထားပါပဲဗျာ..။ နောက်တစ်ခုက သောက်ဆေးပါ…။ဘာလဲဆိုတော့ ကန်စွန်းရိုးနီကို မန်ကျည်းသီးမှည့်နည်းနည်းထည့်ပြုတ်ပြီးကန်စွန်းရွက်ကို သုပ်စားတာပါပဲ…။ အဲ့ဒါနေတိုင်းလုပ်တာ (၇)ရက်နဲ့ ပျောက်ပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းတော့ ရောဂါထပ်မဖြစ်အောင် ကန်စွန်းရွက်ပြုတ်ကို ကြုံရင်သုပ်စားနေဆဲပဲ..။ အဲဒီနည်းနဲ့ပဲ လိပ်ခေါင်းပျောက်တာပါ။ ခင်ဗျားကိုဘယ်သူဆေးနည်းပေးတာလဲဗျကျွန်တော့အဖိုးက တိုင်းရင်းသမားတော်ကြီးဦးကြွယ်လေ..သူရဲ့ဆေးမှတ်စုထဲကရတာပါ…။ လိုသူတို့အတွက် ထိကရုံးနှင့် ကန်စွန်းရိုးနီမှာ သဘာဝအတိုင်းအလွန်ပေါများစွာပေါက်ရောက်တတ်ပါ၍ ဘေးထွက်ဆိုးကြိုးလည်းမရှိ အကုန်အကျလည်းသက်သာသော မြန်မာဆေးမြီးတိုလေးအားတင်ပြလိုက်ပါသည်။လိုသူတို့သုံး စိတ်နှလုံးရွှင်ပြုံးနိုင်ပါစေ။Credit: ရဲမျိုးသူ(ဗောဓိမြိုင်)
ကမ္ဘာ့အအေးဆုံးဒေသက အက်စ်ကီမိုးတွေအကြောင်း သိကောင်းစရာ
ဤကမ္ဘာမြေကြီး၏ မြောက်ဘက်အစွန်ဆုံးအခြမ်း၊ အလွန်အေးသောနေရာများတွင် အက်စ်ကီမိုးလူမျိုးတို့ နေထိုင်ကြသည်။ ရေခဲမှတ်အောက် အနှုတ် ၄၅ ဒီဂရီမျှအထိ အအေးချိန်ရှိနေသည့် ယင်းဒေသတွင် အက်စ်ကီမိုးတို့သည် လွန်ခဲ့သော ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။အက်စကီမိုးတို့ သည်ရေခဲပြင်များသာရှိနေသော အရပ် ဒေသတွင်အစ်ဂလူး (Igloo) ဟုခေါ်သည့် ရေခဲအိမ် သို့မဟုတ် နှင်းခဲအိမ်များအတွင်းနေထိုင်ကာအလွန်ပြင်းထန်လှ သည့် အအေးဒဏ်ကို အံတုရင်း ဘ၀ ရှင်သန်မှုအတွက် ရပ်တည် ကြရပေသည်။ အရှေ့ဘက် ဆိုက်ဘေးရီးယားမှသည် အနောက်ဘက် ဂရင်းလန်၊အလာစကာ နှင့် ကနေဒါ နိုင်ငံအပေါ်ပိုင်းအထိ မိုင်ပေါင်း ၃၅၀၀ ကျော်ရှည်လျားသော ၀င်ရိုး စွန်းဒေသ တစ်လျောက်တွင် အက်စကီမိုးတို့၏ အိမ်များကို မြင်တွေ့နိုင်ကြပေသည်။ အက်စ်ကီမိုးတို့၏ ယဉ်ကျေးမှုသည် လွန်ခဲ့သော နှစ်ငါးထောင်လောက်ကတည်းက အလာစကာ ဒေသတွင် စတင်တည်ရှိခဲ့သည်ဟု ပညာရှင်တို့ကဆိုထားသည်။ ယင်းတို့သည် ဆိုက်ဘေးရီးယားမှ အစပြုကာ လွန်ခဲ့သော နှစ် တစ်သောင်းနှင့်...
ဟင်းငုတ်ပင်ကိုဒေသအလိုက် သခွပ်ပင် ဟင်းဂုတ်ပင် ဟင်းဂွတ်ပင်ဟု ခေါ်ကြသည်။တစ်နိုင်ငံလုံးပေါက်သည် နှစ်ရှည်ပင်ကြ ပင်စည်တွင် အခေါက် အပွေးမရှိအရွက်အနည်းငယ်ဝိုင်း အပွင့်အဖြူရောင် ပဒိုင်းပွင့်နှင့်တူသည်တန်ခူးမှဝါဆိုလအထိပွင့်သည်အသီးမှာသေးသေးရှည်ရှည်။နှစ်ပေခန့်ရှိ။ ဒါကြောင့်လယ်တွေ ထဲမှာပဲရှေ့လူကြိးတွေစိုက်ကြတာထင်ပါ့။ မြွေဆိပ်နိူင်တဲ့ ဟင်းငုတ်ပင် မြွေပွေး မြွေဟောက်ကိုက်ခံရပါကအခေါက်ကိုအမြန်ဝါးစားလိုက်ပါလျှင် အဆိပ်မရှိတော့ပါ ငန်းတော်ကျားငန်း မြွေအပါအဝင်ပါ။(မြွေပွေးနှင်မြွေဟောက်သာအကိုက်ခံသူရှိ၍ဦးစားပေးဖေါ်ပြရခြင်းပါ) ၂။ အဆိပ်ရှိ သတ္တဝါလေးများကိုက်လျှင်လည်းအခေါက်ဝါးးစားပါ။ ၃။ မျက်စေ့နာပါကအခေါက်သွေးပြီးမျက်လုံးကွင်းလိမ်းပါ။မကျည်းခေါက်လိုအပွေးမရှိ။ ၄။ ကိုယ်လက်ကိုက်ခဲပါက အခေါက်ပြုတ်ရေ ချိုးပါ။ ရှေးကတည်းကကလေးတွေကို ရောဂါကင်း။ကိုယ်တွင်းအဆိပ်ကင်းသည်ဆိုကာ သုပ်ကျွေးသည်။အပွင့်ကိုရေနွေးဖျောရုံဖြင့် ကျက်သည် အခြောက်ဆိုရင်ပြုတ် ရသည် အခြောက် အရောင်မဲနေသည်မှလွဲ၍ အရသာမပြောင်းပါ။၃။ ဘီပိုး။စီပိုး ပျောက်သည်ဆိုကာ တော်တော်များများအပွင့်သုပ်စား နေကြသည်။ ဈေးတွင်ဟင်းရွက်တန်း၌ရောင်းချနေကြပါသည် တို့စားစရာအဖြစ်လည်း သုံးသည်။ အရွက်နုကိုဟင်းခါးချက်သောက် ကြသည်။ ကလေးများရေကျောက်ပေါက်လျှင် အရွက်ပြုတ်တိုက်သည်။ တကိုယ်လုံးညောင်းညာကိုက်ခဲလျှင်၎င်း။ ကလေးများကျန်းမာရေးအတွက်၎င်း။ အရွက်ပြုတ်ရေ ဖြင့်ရေချိုးကြသည်။၄။ ဆိတ်ကို မြွေစိမ်းမြီးခြောက်ကိုက်လျှင်ခေါင်းတခုလုံးရောင် မျက်လုံးပိတ် ငါးရက်ခန့်ကြာမှကောင်းသော်လည်း အရွက်ကျွေးပါက တရက်နှင့်ပျောက်သည်။အချုပ်အားဖြင့်မြွေပွေး။မြွေဟောက်ကိုက်ခံရသူများအခေါက်စားသွားသဖြင့် ဆေးရုံ...